आजको राशिफल: यी ३ राशिका लागि फलिफाप ! – Khabar Patrika Np
आजको राशिफल: यी ३ राशिका लागि फलिफाप !
प्रकाशित मिति: मंगलबार, पौष २०, २०७८ समय: १२:४७:००
२० पुस, २०७८ मंगलबार । तदनुसार ४, जनवरी २०२२। पौषशुक्लपक्ष द्धितीया तिथि, उत्तराषाढा नक्षत्र, हर्षण योग, बालव करण चन्द्रमा मकर राशिमा छ ।
मंगलबार गरेको काम शुभ हुन्छ । त्यसैले त कुनै पनि काम मंगलबार गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने बारलाई मान्यता दिने पनि गरिन्छ । सनातन परम्परामा कुनैपनि कामको शुरुवात गर्नुभन्दा पहिले गणेशलाई प्राथना र अनुरोध गर्ने चलन छ ।
Sex Lasts More Than3Hours Without Viagra! Write Down The Recipe
मेष (चु.चे.चो.ला.लि.लु.ले.लो.अ) : मंगलबार नयाँ कामको शुरुवात गर्न सकिनेछ । स्वास्थ्यमा प्रतिकुलता र विजय प्राप्त हुनेछ । शत्रुमाथिको विजय प्राप्ति हुने भए पनि आर्थिक व्यय र हानी हुने देखिन्छ । विलासिताको सामान खरिद र यात्रामा जाँदा अर्थहानी हुने सम्भावना रहन्छ ।
वृष (इ.उ.ए.ओ.वा.वि.वु.वे.वो) : आजको दिन यात्रा गर्न खोज्नु भएको छ भने त्यति फलदायीभन्दा यात्रा कष्टकर हुनेछ । यदी यात्रा गर्नै पर्ने छ भने पूर्व दिशा तर्फ फर्केर यात्रा शुरुवात गर्नुहोला । सामाजिक सेवा र अध्यात्म सेवाको काममा मन लगाउनु होला । बालक, बृद्धलाई भोजन र बस्त्र दान गर्नुभयो भने तपाईको मन खुसी हुनेछ ।
मिथुन (क.कि.कु.घ.ङ.छ.के.को.ह) : आजको दिन परिवार र आफन्तजनमा विवाद हुनसक्छ । आजको दिन मौन रहनु ठीक होला ।व्यापारमा रहेका साझेदारसँग अनावश्यक विवाद उत्पन्न हुनसक्छ त्यसैले मौन रहेर काम गर्दा तपाईलाई निकै फाइदा हुन्छ । आवश्यक भन्दा बढी नबोल्ने नियमित काम मात्र गर्ने ।
कर्कट (हि.हू.हे.हो.डा.डि.डु.डे.डो) : धनप्राप्तिको योग छ । नयाँ वस्त्र खरिद गरेर लगाउन सक्नुहुनेछ । आफन्त र मित्रजनबाट साथ सहयोग पाउनुहुनेछ । निराशा हटेर आशाका किरण फैलने छन् । अर्थकारोबार गर्दा विचार गर्नुहोला । कसैलाई दिनुभएको सापटी रकम समेत तपाईले पाउनुहुनेछ । कसैमाथि नकारात्मक सोचर काम नगर्नुहोला ।
सिंह (मा.मि.मु.मे.मो.टा.टि.टु.टे) : मित्रसँग अनावश्यक विवाद हुनसक्छ त्यसैले सिंह राशिका जातकले विचार गर्नुहोस् । लामो दूरीको यात्रा पनि नगर्दा बेेस हुनेछ । स्वास्थ्यमा प्रतिकुल असर र आर्थिक व्यय हुने सम्भावना बढी छ । अध्ययनअध्यापनको काममा बाधा उत्पन्न हुनसक्छ । तपाईंले विश्वास गरेको मित्रबाट तपाईलाई धोका हुनसक्छ । परिवारका सदस्यसँग विवाद हुनसक्छ ।
तुला (रा.री.रु.रे.रो.ता.ती.तु.ते) : अनावश्यक यात्रा र अनावश्यक खर्च व्ययभार बढ्ने छ । आफ्नो स्वास्थ्यमा ध्यान दिनुहोला । परिवारका सदस्यमा समेत स्वास्थ्य समस्या हुनसक्छ त्यसैले आजको दिन तुला राशिको जातकले कुनै पनि काम गर्दा ध्यान दिनुहोला । तपाईंले सोचअनुसार काम नहुँदा तपाईको मनमा अनेक प्रश्न उठनसक्छन् ।
वृश्चिक (तो.ना.नि.नु.ने.नो.या.यि.यु) :स्त्रीबाट साथ सहयोग मिल्नेछ । घरबाट बाहिर निस्कदा आमा, श्रीमती, छोरीलाई जानकारी दिएर काममा निस्कनु भयो भने आजको दिन तपाईंको कार्य सफलता मिल्नेछ । आफन्त र मित्रजनले भेटघाट र भोजनका लागि अनुरोध समेत गर्नेछन् । सरकारी काममा अवरोध आएको छ भने आजको दिन जानु भएमा काम छिटो हुनसक्छ ।
कुम्भ (गु.गे.गो.सा.सी.सु.से.सो.द) : नियमित काम बाहेक अन्य काममा त्यति ध्यान नदिनु होला । यात्रा गर्नुभन्दा पहिले पूर्वतयारी गर्नुहोला । आकस्मिक समस्या र मनमा अशान्त छाउने छ । तपाईंले सोचअनुसारको काममा कठिनाई हुनेछ । व्यापारमा हुनुहुन्छ भने धैर्यपूर्वक कार्य गर्नुहोला । आजको दिन तपाईंले बालकलाई भोजन गराउनु भएकामा मनमा शान्ति मिल्नेछ ।
मीन(दी.दु.थ.झ.ञ.दे.दो.च.ची) : दाम्पत्य जीवनमा सुख प्राप्तिका लागि परिवारका सदस्यसँग यात्रा गर्नुहोला । घरमा खानेकुरा किनेर ल्याइदा परिवारमा हर्ष छाउने छ । मंगलबार दिन लेख्ने र पढ्ने कामको शुरुवात गर्नसक्नुहुन्छ । कुनै नयाँ पुस्तक खरिद, बस्त्र खरिद, दान तथा शिवालय र देवालयमा गएर भोकालाई खानेकुरा खान दिनुभयो भने तपाईंको उन्नती र प्रगति हुँदै जानेछ ।